August 27, 2020 adminLeaveaComment on जुम्लामा गोबिन्द केसीलाई अन,सन बस्न दिइएन : नि,षेधाज्ञामै प्रद,र्शन गर्ने तया,री
चिकि,त्सा क्षे,त्रको सु,धारको मा`ग गर्दै अन,शन बस्न जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई प्र`हरीले अन`सन बस्न दिएको छैन । प्र`हरीले केसी बसेको होट,ललाई विहानैदेखि घे,रा हालेको छ । डा. केसीका सम`र्थनमा जुम्लाका युवाहरुले केही बेरमा प्रद`र्शन गर्ने भएका छन्। को`रोनाको म,हामा,रीले जुम्लामा निषेधा`ज्ञा जा,री छ। त्यसको प्रवा,ह नगरी डाक्टर गोविन्द केसी अन,सन बस्न जुम्ला पुगेका हुन्।
चि,कित्सा क्षेत्र सु,धारका विभिन्न मा,ग राखेर डाक्टर गोविन्द केसी अ,नश,न बस्न थालेको ८ वर्ष भयो। ६ वर्षको अव,धिमा केसी अहिलेसम्म कैयौं पटक अ,नश,नमा बसिसकेका छन् । हरेक अनशनमा डा केसीलाई कुनै न कुनै दल या समूहको ‘ट्याग’ लगाउनेहरु सक्रि,य हुन्छन्। र, हरेक दल सरकारमा पुगेपछि गोविन्द केसीलाई स,त्रु श,क्तिका रुपमा बुझ्न थाल्छ।
केसीको पहिलो अ,नश,न थियो – २०६९ असार २१ गतेदेखि। पहिलो अ,नश,न ५ दिनमा नै सकियो। ४ बुँदे मा,ग राखेका केसीको प्र,मुख मा,ग त्रिविको ह,स्तक्षे,पबाट आइओएम’लाई मु,क्त गर भन्ने थियो। डा केसीको अन,श,नको वि,रोध गर्ने पाठकहरूले भने संस,द्को सर्वो,च्चता हुनुपर्ने र सरकारी कर्म,चारीले सरकारको वि,रोध गर्नु जा,ज,य नहुने त,र्क दिएका छन्।
भेषराज निरौला लेख्छन्, “केसीले सा,र्वभौ,मसत्ता सम्प,न्न संस,द्को ह,स्तक्षे,प र अ,पमा,न गर्न मिल्दैन। यो कानुन नबनाउनु, यो बनाउनु, मैले भने जसरी च,ल्नु भन्ने अधि,कार उहाँलाई छैन। यदि उहाँले भने जसरी अगाडि बढ्ने हो भने संसद् भ,ङ्ग गरेर केसीलाई राज्य सु,म्पे भइगयो नि। यदि सरकारले ग,लत ऐननि,यम ल्याएको भए अदा,लतबाट त्यसको न्या,यिक निरू,पण गर्दा ठिक होला।” -ktmdainik